ठूला नेताः को कहाँका मतदाता ? – ToplineKhabar
ठूला नेताः को कहाँका मतदाता ?
April 8, 2017 नरेस तिवारी0Comment
२६ चैत, काठमाडौं । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला नेताको मतदाता नामावलीबारे जानकारीमूलक सामग्री पस्केको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा मतदाता नामावली छन् । उनले काठमाडौं १० मा मतदान गर्नेछिन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको मतदाता नामावली भने गोली गाउँपालिका-२, रोल्पामा छ । उनी मतदान गर्न रोल्पा जानुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मतदाता नामावली भरतपुर महानगरपालिका-६, चितवनमा छ । उनले चितवनबाट मतदान गर्नेछन् । सभामुख ओनसरी घर्तीको रोल्पा नगरपालिका ७, रोल्पामा मतदाता नामावली छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गन्यापधुरा गाउँपालिका-१ डडेल्धुरामा मतदाता नामावली छ । देउवा स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न डडेल्धुरा जानेछन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली दमक नगरपालिका-१२, झापामा छ । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सूर्योदय नगरपालिका-९, इलाममा मतदाता नामावली छ । माधवकुमार नेपालले गौर नगरपालिका ३ बाट मतदान गर्नेछन् । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईको मतदाता नामावली पालुङटार नगरपालिका १, गोरखामा छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मतदाता नामावली विराटनगर उपमहानगरपालिका १४, मोरङमा छ । उनले विराटनगरबाटै मतदान गर्न पाउनेछन् ।
← नन्दा देवि बहमुखी क्याम्पस प्रमुखमा गौरी प्रसाद भट्टराई नियुत्त
आइजिपी नियुक्तिबारे सत्तारुढ दलबीच सहमति, प्रकाश अर्याल बन्ने भए प्रहरी कमान्डर →
गैरकानुनी रुपमा बस्ने पर्यटक बढे
September 4, 2016 प्रदीप भट्ट 0
धमाधम भेटिँदैछन् ‘हराइएका’ हतियार (लिस्टसहित)
December 28, 2016 नरेस तिवारी 0
सत्तारुढ दलकै नेताले यसरी खोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहस्य
October 17, 2016 नरेस तिवारी 0